NISA oo soo bandhigtay nin ay sheegtay inuu weerar qorsheynayay – Somali Top News
NISA oo soo bandhigtay nin ay sheegtay inuu weerar qorsheynayay
December 4, 2019 Somali Top News	0 Comments NISA oo soo bandhigtay nin ay sheegtay inuu weerar qorsheynayay
Hay’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa soo bandhigtay sawirka Nin ay sheegtay in uu qorsheynayay in uu weerar fuliyo.
Bogga Twitterka ee Nabad Sugidda Soomaaliya ayaa lagu daabacay qoraal kooban oo lagu sheegay in Ninkaasi uu doonayay in uu geysto weerar isaga oo adeegsanaya Bam-gacmeed hay’adaha amaankana ay gacanta ku dhigeen.
“Ciidamada Amniga, ayaa caawa gacanta kusoo dhigay dhagarqabe katirsan AS, isagoo doonayey inuu Bam-gacmeed tuuro, waxaana la qabtay isagoon wax qasaara ah u gaysan shacabka. Waxaana la xisaabtamaya hay’adaha ku shaqada leh.”.
NISA ayaa dhowr jeer sidan oo kale baahisay Sawirrada dad ay ku eedeeyeen in ay ka tirsanyihiin Al-shabaab iyo Daacish,kuwaas oo ay sheegeen in ay ku qabteen howlgallo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho, waxaase yar in maxkamad la soo taago oo la xukumo.
← Odiyaasha ka soo horjeeda madaxweynaha Puntland oo iska fogeeyay iney xiriir la leeyihiin DF
Wabiga Shabelle oo fatahaad ka sameysay tuulooyin hoos taga dagmada Balcad →
Sarkaal katirsan ciidanka Badda ee Puntlland oo lagu dilay Boosaaso